Muti unofukidza → Metal uye inokanda simbi miti grilles
ikozvino idiki yemaguta ekuvakwa zvakare muti unofukidza. Izvi zvinoshanda uye zvinonakidza zvinhu zvinogona kugadzirwa zvakasiyana siyana.
Miti iripo nzvimbo yemadhorobha ivimbiso yehutano hwevagari, zororo uye kunzwa kwakanaka kwevanhu kune vanogara munzvimbo yakasvibira. Miti inochenesa mweya, inogadzira okisijeni, inodzikisa tembiricha yekupisa pamazuva anopisa, wedzera mweya unyoro, shandura kutonga kwemvura uye kuderedza ruzha rweguta uye simba remhepo.
maonero online chigadzirwa katalog >> kana kurodha makatalog >>
Nekudaro, kuti vakure uye vakure zvakanaka, ivo vanofanirwa kuchengetedzwa kubva kuzviitiko zvinokuvadza zvinogona kuvaparadza.
Ndokusaka machira emuti achishandiswa kakawanda uye kakawanda, ayo akakwana kwete mukati mapaki uye muzvikwere, asiwo pamatanho uye mumizinda yemaguta.
Izvo zvivharo zvinodzivirira miti kubva kumhuka, vanofamba netsoka uye mota dzinofamba pamusoro padzo.
Ona mienzaniso yeMETALCO realizations
Muti unofukidza uye simbi uye yakakanda simbi miti grates
Miti inofukidza uye grates yesimbi uye yakakandwa-simbi miti inogadzira kushongedza kwekushongedza kwezvirimwa zvinowanikwa kwete munzvimbo yemaguta chete, asiwo mukati minda.
Izvo zvakagadzirwa mumhando dzakasiyana-siyana uye maumbirwo.
Iyo yakakanda simbi yemiti yemicheka yakafukidza fashoni uye zvazvino magadzirirwo kuti akwanise chero emadhorobha nepasi nzvimbo nzvimbo.
Onawo: Paki, guta uye mabhenji ebhenji
Varindi vemuti vanoitirwa kuchengetedzwa kwavo vanogona kunge akatwasuka kana akatwasuka.
Ivharo, yakagadzirirwa seyakagadzika, i.e. grates yemuti, chengetedza iyo midzi yemuti kubva kune chero kukuvara kwemuchina, asi uchiona kuyerera kwemvura kwemahara.
mira muti unofukidza vanoita basa rekudzivirira uye rinoyevedza, vachisimbisa kukura kwemahara kwezvinomera pasina kutyisidzira kubva kune vanopfuura, nemotokari kana mhuka.
Onawo: Bindu mapoto uye zvinhu zvavo - ndeipi yakanyanya kunaka?
Maitiro akakodzera emuti wakashandiswa anovharira unovaita chinhu chediki rekushongedza nzvimbo yemadhorobha.
Inoshanda uye yakashongedzwa simbi masimbi emiti ndeyekudzivirira kwakanyanya kudikanwa kwemiti, uye nekuda kwekuumbwa kwavo kwemazuva ano uye mavara, vanova chishongo chenzvimbo dzeruzhinji.
Muti unofukidza to diki yekuvaka, inonyatsobudirira mukuvandudzika kwemadhorobha, uko greenery yemumaguta yakamboshandiswa munzvimbo yakashomeka, sekushongedzwa kwechisikirwo mukuumbwa kwematanho ekutenga uye ekutaurirana.
Metal inofukidza yemiti anesthetic mhinduro dzinodzivirira zvidyarwa mumadhorobha, asi panguva imwechete bvumidza yemahara kuyerera kwemvura kune iyo midzi system.
Onawo: Bhasikoro rack - mhando uye zvakanakira
Miti iri mukati meguta iri zvakanyanya panjodzi yekukuvara, kwete kungokuvadza kwemakemikari, zvakakonzerwa, semuenzaniso, nemafuta akawandisa emota anofema, asiwo nekukuvara kwemishini. Saka ivo vanoda kuchengetwa kwakakosha. Naizvozvo, munzvimbo dzine nzvimbo isina kukwana uye mota inorema uye yevanofamba netsoka, nzvimbo dzakasvibirira dzemadhorobha dzinofanira kuchengetedzwa zvakanyanya. Ivhavha yemuti yakakodzera inodzivirira chirimwa kwete chete pakuparadza, asiwo nezvimwe zvinhu.
Horizontal kugutsika uye mira makavha akagadzirwa nesimbi yesimbi nesimbi zvinopesana zvakanyanya kune zvekunze zvinhu uye zvemaziso kukuvara, saka zvinonyatso chengetedza miti. Zvinhu zvemabutiro emiti, zvakafananidzwa nemiti uye nzvimbo dzemadhorobha, ndeimwe yekushongedza kwenzvimbo.
Iyo yechinyakare kana yemazuva ano fomu yemuti uye grill inofukidza zvakakwana mune chimiro chenzvimbo yakapihwa yemadhorobha.
Onawo: Fence zvindiro
Varindi vemuti vemuti vanoshandiswawo muminda yemumba uye yeminda yemichero, apo vanodzivirira nemiti yemichero kubva mukukuvara kunokonzerwa nemhuka dzinocheka bark kana mashizha emiti. Muti wemichero unovhara saka vakadikanwa sezvakaita mumaguta, nekuti vanoona kuchengetedza zvidyarwa muminda nemarera.
Dzimwe nguva mutambo wemusango kana guruva rinodzura maburi anokuvadza miti zvisingaitwe, kunyanya madiki madhiri. Yakavharwa yemiti yakakodzera ichavatendera kuti vakure vakadzikama.
Miti inovhara nemakomba madiki anozozviratidza pachavo zvakanyanya munguva yechando, apo hares nemhara zvichange zvichitsvaga chikafu uye nechido kushingirira pamiti muminda. Aya mabutiro anopa iwo muti iwo wakakwana mhepo uye chiedza, uye panguva imwechete kudzivirira mhuka kubva mukukuvadza muti.
Kuti urege kukuvadza midzi yemiti yemichero uye shizha rekushongedza panguva yekucheka, zvakakodzera kushandisa zvifukidzo zvemiti zvinovhara midzi nekudzivirira kukura kweuswa hwakakomberedza miti.
Micheka yemiti yave chinhu chinowanzoitika chekudzivirira zvidyarwa zvebindu uye nharaunda dzegirinhi dzakasvibirira pamhepo. Pamusoro pekuvhara, mhando dzakasiyana dzemagirazi emuti zvinoshandiswa kuchengetedza midzi yemuti kubva mukukuvara uye kuve nechokwadi chekuwana kwemvura muti.
Onawo: Concrete machira
4.9 / 5 ( 29 mavhoti )
Esgro anofuratira mitiMuti gratesmutengo wedandainowanika muti gratingzvigadzirwa zvesimbi zvemitisvina magirazi emitikurasa zvidhori zvesimbi pamitengo yemitidiki dhizaini yekufukidza yemitisimbi inofukidza yemitisimbi yakawanikwa yemafuta gratesmuti unofukidzacasings yemiti yemuticasings yemiti inonzi castoramamutengo unofuridzaleroy merlin muti casingsinovhara yemiti yebhuruuinovhara yemiti yemitiinofukidza yemiti yeonikisikukuvara kwemiti yemicherocasings yemiti yemichero Allegromuti wemichero unotengesa mutengomiti yemichero inotengesamuti unodzvinyirira mugadziriinodzivirira zvifukidzo zvemitimesh inovhara yemitiVarindi vemiti uye simbi uye vanokanda simbi miti gratessimbi inofukidza yemitimuti unofukidzamuti unofukidza mutengomuti unovhara zvidiki zvekuvakisainovhara yemiti yemicherozvigadzirwa zvemuti wakashongedzwaakacheneswa muti casings mutengomuti wakachipa unofukidzaakakanda simbi miti inovhara
Ona zvimwe zvinyorwa:
Nhandare yemitambo yemazuva ano inobvumira kunakidzwa kusingabvumirwe uye kwakachengeteka mumhepo yekunze kwete chete kwevana veese mazera, asiwo vechidiki. ...
Kurukisa masisitimu enzvimbo yekuuraya mishonga mumakamuri uchishandisa iyo yakaoma fog nzira
Misting masisitimu anoshandiswa mune yakaoma fog disinawon maitiro anogona kushandiswa munzvimbo dzakasiyana siyana. Izvozvi izvo ...
Nyowani pane zvekupa! Disinversal zviteshi - hutsanana hwemaoko kubva kuMETALCO
Disinfection zviteshi / ruoko utsanana zviteshi chinhu chisingaoneki mune kwedu kupa sechinhu chidiki chekuvaka. Iyo mhinduro inorerutsa ...
Diki rekuvakira rakagadzirwa nezvinhu zvidiki zvekuvakisa zvakasanganiswa munzvimbo yedhorobha kana kuisirwa pachivande ..
Chikamu cheVagadziri veRepublic of Poland
Ichokwadi kuti basa remugadziri inyanzvi yemahara inogona kuunza kugutsikana kwakawanda uye zvikwanisiro zvekunyama, asi nzira yekutanga kushanda ...
Tsvina yekuparadzanisa mabhini sechikamu chekudzokorora kwemasita kunobatsira kuchengetedza nzvimbo dzeruzhinji dzakachena, kubvisa matambudziko ane chekuita ...
Ndakaverenga uye ndinogamuchira iyo webhusaiti mirau
Tumira kubvunza kwako